မြေပုံမီးရထားကုမ္ပဏီ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
တူရကီအတွက် operating မီးရထားကုမ္ပဏီများသည်မြေပုံကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပါပြီ။ သင်ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပေးသွင်းကျော်မြေပုံနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များရနိုင်, ကုမ္ပဏီအမျိုးအစားအညီအနီးကပ်ဆုံး query နိုင်ပါတယ်။
ဤနေရာတွင်သင့်ကုမ္ပဏီလျှင်, လိပ်စာ iletisim@rayhaber.co မှ e-mail ကိုပေးပို့နိုင်ပါသည်!
ရှာရန် 10 ကီလိုမီတာ25 ကီလိုမီတာ50 ကီလိုမီတာ100 ကီလိုမီတာ200 ကီလိုမီတာ500 ကီလိုမီတာ1000 ကီလိုမီတာ1500 ကီလိုမီတာ
Ankaray မြေပုံ | Line နဲ့စခန်းများ Ankaray Ankaray မြေပုံ 11 / 04 / 2012 ကျနော်တို့တူရကီမြေအောက်ရထားနှင့်အလင်းရထားလမ်းစနစ်ကပြည့်စုံခရီးစဉ်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်သင်တို့အဘို့ Anrakay အပြန်အလှန်ပတ်ဝန်းကျင် map ပြီ Ankaray မြေပုံ: Ankaray မီထရိုလိုင်း, Ankaray စခန်းများ - A1 မက်ထရိုလိုင်း Dikimevi- Aştiဘတ်စ်ကား terminal ကိုမှတ်တိုင်များအကြားဝန်ဆောင်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးနေသောခေါင်းစဉ်: ဝတ်စုံချုပ်သူရဲ့လွတ်မြောက်ရေးကောလိပ်လခြမ်း Demirtepe Maltepe Tandogan Besevler Bahçelievler ASTI အလုပ်သမားရေးရာရုံးနာရီအတွင်း: 06: 00 - 24: Ankaray လခြမ်းနီဘူတာရုံအမှုဆောင်နာရီအကြား 00 အဆိုပါတူရကီမြေအောက်ရထားနှင့် ဆက်စပ်. ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကုန်ကျစရိတ်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်: ဆောက်လုပ်ရေး 1992 ၏နွေရာသီအတွက်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖြစ်လာပြီးယခုနှစ် 550 1996 သန်းဂျာမန်အမှတ်အသားနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများ Ankaray အတွက်စတင်ခဲ့သည်။ 8,5 ကီလိုမီတာရှည်လျားပြီး ...
TCDD Kutahya - Balikesir မီးရထားလိုင်းလမ်းမကြီးပြုပြင်မွမ်းမံရေးစီမံကိန်းကိုGökçedağ - မီးရထားလိုင်းပြင်ဆင်ပေးခြင်းများအကြား Nusrat လမ်းဘူတာရုံစာချုပ်အလုပ်လုပ်တယ်ကုမ္ပဏီ၏တင်ဒါအနိုင်ရနှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး 16 / 01 / 2013 တူရကီပြည်နယ်မီးရထားဟာကိုစုဝေးစေအဆိုပြုချက်များတွင် (TCDD) Enterprises အထွေထွေညွှန်ကြားမှု 28 စက်တင်ဘာလ 2010 ရက်စွဲ, Kütahya - Balikesir Gökçedağနယ်ပယ်မီးရထားလိုင်းလမ်းမကြီးပြုပြင်မွမ်းမံရေးစီမံကိန်းကို - Nusrat ဘူတာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 110 lKm မီးရထားလိုင်းလမ်းမကြီးပြန်လည်မွမ်းမံဆောက်လုပ်ခြင်းကိုနူးညံ့မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်နှင့်ဆက်စပ်သောသစ်ကိုဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအကြား။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, Kolin အတွက်ဆောက်လုပ်ရေးဖက်စပ်နှင့်အတူ 40.760.310,91 ပေါင်စာချုပ်ထွက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ - GCF ဟုတရားရုံးအမိန့်နှင့်အတူနုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ပိုပြီးသတင်းအဘို့, နှိပျပါ: ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရင်းမြစ်: Investments
TCDD Kutahya - Balikesir မီးရထားလိုင်းလမ်းမကြီးပြုပြင်မွမ်းမံရေးစီမံကိန်းကိုGökçedağ - မီးရထားလိုင်းပြင်ဆင်ပေးခြင်းများအကြား Nusrat လမ်းဘူတာရုံစာချုပ်အလုပ်လုပ်တယ်ကုမ္ပဏီ၏တင်ဒါအနိုင်ရနှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး 21 / 01 / 2013 တူရကီပြည်နယ်မီးရထားဟာကိုစုဝေးစေအဆိုပြုချက်များတွင် (TCDD) Enterprises အထွေထွေညွှန်ကြားမှု 28 စက်တင်ဘာလ 2010 ရက်စွဲ, Kütahya - Balikesir Gökçedağနယ်ပယ်မီးရထားလိုင်းလမ်းမကြီးပြုပြင်မွမ်းမံရေးစီမံကိန်းကို - Nusrat ဘူတာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 110 lKm မီးရထားလိုင်းလမ်းမကြီးပြန်လည်မွမ်းမံဆောက်လုပ်ခြင်းကိုနူးညံ့မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်နှင့်ဆက်စပ်သောသစ်ကိုဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအကြား။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, Kolin အတွက်ဆောက်လုပ်ရေးဖက်စပ်နှင့်အတူ 40.760.310,91 ပေါင်စာချုပ်ထွက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ - GCF ဟုတရားရုံးအမိန့်နှင့်အတူနုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ Fera ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီမှအစောပိုင်းကလူသိများအဖြစ်ကနေ့ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့စာချုပ်ကျော် 09 စက်တင်ဘာလ 2011 59.740.982 ပေါင်နှင့်အတူနုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ဒီအဆင့်မှာကျနော်တို့ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူများတွေ့ဆုံမေးမြန်း ...
TCDD3။ ဧရိယာ odemis - ချယ်ရီနယူးမီးရထားစီမံကိန်းလေ့လာမှု - စီမံကိန်း၏ - ကုမ္ပဏီကတင်ဒါအင်ဂျင်နီယာအနိုင်ရအတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး 22 / 03 / 2012 တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD)3။ အဆိုပါဒေသတွင်းညွှန်ကြားမှု "odemis - ချယ်ရီနယူးမီးရထားဆောက်လုပ်ရေးစီးပွားရေးပိုင်ဆိုင်; လေ့လာ, ဒီဇိုင်း, အင်ဂျင်နီယာ, ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးန်ဆောင်မှုများယောဘကို "အသစ်ကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု၏ဝယ်ယူရေးနှင့်စပ်လျဉ်းမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, စာချုပ်များ၏ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ 811.478,26 416.115 Aqsa စီမံကိန်းကုမ္ပဏီမှပေါင် POUNDS ကျော်လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးများအတွက်တင်ဒါအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ Bosphorus စီမံကိန်း 2: လူသိများသည်နှင့်အမျှအောက်ပါအတိုင်းနုပါဝင်အခြားကုမ္ပဏီများဖြစ်ကြသည်ဟုဆိုသည်။ Enya ဆောက်လုပ်ရေး3။ KMG စီမံကိန်း4။ ZTM အင်ဂျင်နီယာရင်းမြစ်: Investments
TCDD Toprakkale - ဥယျာဉ်စခန်းများနှစ်ချက်လိုင်းမီးရထားစီမံကိန်းလေ့လာမှုစီမံကိန်းကိုအင်ဂျင်နီယာနှင့်အတိုင်ပင်ခံန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတခုအကြားတွင်နုဆုရှင်နှင့်အတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး 19 / 09 / 2012 တူရကီပြည်နယ် Demiryo (TCDD) အရှေ့တောင်ပိုင်း Anatolia စီမံကိန်းရဲ့လုပ်ငန်းညွှန်ကြားမှုအထွေထွေ (GAP) Action Plan Toprakkale "ဟုအဆိုပါအောက်မှာ" - ဥယျာဉ်ဘူတာလက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုနှစ်ချက်လိုင်းမီးရထားစစ်တမ်းစီမံကိန်းအင်ဂျင်နီယာနှင့်အတိုင်ပင်ခံန်ဆောင်မှုများ "ဟုအဆိုပါဝယ်ယူရေးနှင့်စပ်လျဉ်းအသစ်ကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, အင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီတစ်ခုက SWS နုစာချုပ်များ၏ဆုရှင် 1.568.109 ပေါင်နှင့်အတူထွက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်။ ပိုပြီးသတင်းအဘို့, နှိပျပါ: ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရင်းမြစ်: Investments
TCDD 1 ။ ခရိုင် Arifiye - ကုမ္ပဏီဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါအနိုင်ရနှင့်အတူ Larch မီးရထားအခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး 21 / 06 / 2013 TCDD 1 ။ တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) အိမ်ခြံမြေ 1: - ခရိုင် Arifiye Larch မီးရထားအခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းကုမ္ပဏီဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါအနိုင်ရအတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ဇန်နဝါရီလ 31 2013 အတွက်အိမ်ခြံမြေနှင့်ဆောက်လုပ်ရေး၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုကီလိုမီတာနယူး 129 623 ကနေသမိုင်း၌ပြုသောပူဇော်သက္ကာ, Arifiye (+ 138 700) Larch (+92) စုဆောင်း။ လိုင်းမီးရထားအခြေခံအဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါအပြီးသတ်ခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, Omer က Akif Yazicioglu အဆိုပါဖက်စပ်အနိုင်ရ - သူ Sun ကလမ်းမကြီးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများက 12.239.600 ပေါင်တင်ဒါကမ်းလှမ်းမှုကိုကဆိုသည်။ စာချုပ်များ၏ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေဇွန်လ 20.462.278,41 06 ပေါင်အတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်နှင့်အတူ 2013 ဖက်စပ်နုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ source ...
Konya, အဆောက်လုပ်ရေးကန်ထရိုက်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးကုမ္ပဏီမှဖိတ်ကြား Karaman မီးရထားလိုင်းစီမံကိန်း Winners 09 / 01 / 2014 TCDD Konya - Karaman မီးရထားလိုင်းစီမံကိန်းGülermakဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါအနိုင်ရ - Kolin ဆောက်လုပ်ရေးဖက်စပ်သဘောတူညီချက်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ "- ရှိရင်းစွဲအစီအစဉ်ဗြဲအဆိုပါပြန်သွားအကြားတွင် Karaman စခန်းများနှစ်ချက်ပြတ်ရွေ့လိုင်း Konya" အသစ်ကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု၏ဝယ်ယူရေးနှင့်စပ်လျဉ်းမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD), အိမ်ခြံမြေ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုအားဖြင့်ကျင်းပပါလိမ့်မည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, Gülermakနုအနိုင်ရ - စာချုပ်ကျော်ဇန်နဝါရီလ 03 2014 235.025.754 ပေါင်ပေါ်ကြိုးပမ်းမှု edildi.ortak ဖို့ဖိတ်ခေါ်နှင့်အတူ Kolin ဆောက်လုပ်ရေးဖက်စပ်စာချုပ်လာမယ့်နေ့ရက်ကာလ၌လက်မှတ်ရေးထိုးလိမ့်မည်။ အဖြစ်ဖော်ထုတ်နု၏အနီးစပ်ဆုံးကုန်ကျစရိတ် 438.143.568,78 16 ကုမ္ပဏီများမှလေလံခဲ့ POUNDS ။ မတ်လ 11, သင်သိသည့်အတိုင်း ...
ဆိပ်ကမ်းများသို့ပြန်သွားရန် Yard လမ်းနှင့်ရထားလမ်း Connections ကို Project မှမာစတာအစီအစဉ်ကိုအနိုင်ရလေလံကြေညာခဲ့သည်ထားပြီးလုပ် 02 / 04 / 2014 AYGM ဆိပ်ကမ်းသို့ပြန်သွားရန် Dols နူးညံ့၏ Yard လမ်းနှင့်ရထားလမ်း Connections ကို Project မှမာစတာအစီအစဉ်ဆောက်လုပ်ရေး - လင်းပိုင်အင်ဂျင်နီယာယင်းကိုစုဝေးစေအဆိုပြုချက်, "ဆိပ်ကမ်းသို့ပြန်သွားရန် Yard လမ်းနှင့်ရထားဆက်သွယ်ရေးမဟာစီမံကိန်းလေ့လာအကြံပေးဝန်ဆောင်မှု" တွင်အခြေခံအဆောက်အဦရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထွေထွေညွှန်ကြားမှု (AYGM) 25 ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 နေ့စွဲအကြားဖက်စပ်အနိုင်ရ တင်ဒါအပြီးသတ်ခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, နုကမ်းလှမ်းမှုကို 647.500 ပေါင်အင်ဂျင်နီယာနှင့်အတူ Dols - အင်ဂျင်နီယာလင်းပိုင်တို့သည်ဖက်စပ်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါဖက်စပ်သဘောတူညီချက်ယနေ့နှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့လိမ့်မည်။ 1.500.000 ပေါင်အောက်ပါအတိုင်းအဖြစ်ခန့်မှန်းခြေကုန်ကျစရိတ်များအတွက်တင်ဒါလေလံအခြားကုမ္ပဏီများဖြစ်ကြသည်။ ကြွေ, Mega Project မှအင်ဂျင်နီယာအတိုင်ပင်ခံအင်ဂျင်နီယာ Bogazici Altınok Optimizer ...
ဆိပ်ကမ်းများသို့ပြန်သွားရန် Yard လမ်းနှင့်ရထားလမ်း Connections ကို Project မှမာစတာအစီအစဉ်ဆောက်လုပ်ရေးကန်ထရိုက်ကုမ္ပဏီတင်ဒါအနိုင်ရနှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည် 10 / 04 / 2014 AYGM ဆိပ်ကမ်းသို့ပြန်သွားရန် Dols ၏ Yard လမ်းနှင့်ရထားလမ်း Connections ကို Project မှမာစတာအစီအစဉ်ကိုဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါအနိုင်ရ - လင်းပိုင်အင်ဂျင်နီယာဆိပ်ကမ်းသို့ပြန်သွားရန် Yard လမ်းနှင့်ရထားဆက်သွယ်ရေးမဟာစီမံကိန်းလေ့လာမှု ", အကိုစုဝေးစေအဆိုပြုချက်များတွင်ဖက်စပ်အခြေခံအဆောက်အအုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထွေထွေညွှန်ကြားမှု (AYGM) 25 ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 နေ့စွဲနှင့်အတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး အတိုင်ပင်ခံန်ဆောင်မှုများ "အသစ်ကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု၏ဝယ်ယူရေးနှင့်စပ်လျဉ်းမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, အဆိုပါဖက်စပ်စာချုပ် 1.500.000 ပေါင်ကျော်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်နှင့်အတူဧပြီလအင်ဂျင်နီယာ Dolfin 03 2014 ရက်ပေါင်း - Dols နု 647.500 ပေါင်အင်ဂျင်နီယာများ၏ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ပါသည်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပြုလုပ်လူသိများသည်အတိုင်းတင်ဒါလေလံအခြားကုမ္ပဏီများ, ဖြစ်ခဲ့သည်: ...
TCDD Kutahya - Balikesir မီးရထားလိုင်းလမ်းမကြီးပြုပြင်မွမ်းမံရေးစီမံကိန်းကိုGökçedağ - မီးရထားလိုင်းပြင်ဆင်ပေးခြင်းများအကြား Nusrat လမ်းဘူတာရုံစာချုပ်အလုပ်လုပ်တယ်ကုမ္ပဏီ၏တင်ဒါအနိုင်ရနှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး
TCDD3။ ဧရိယာ odemis - ချယ်ရီနယူးမီးရထားစီမံကိန်းလေ့လာမှု - စီမံကိန်း၏ - ကုမ္ပဏီကတင်ဒါအင်ဂျင်နီယာအနိုင်ရအတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး
TCDD Toprakkale - ဥယျာဉ်စခန်းများနှစ်ချက်လိုင်းမီးရထားစီမံကိန်းလေ့လာမှုစီမံကိန်းကိုအင်ဂျင်နီယာနှင့်အတိုင်ပင်ခံန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတခုအကြားတွင်နုဆုရှင်နှင့်အတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး
TCDD 1 ။ ခရိုင် Arifiye - ကုမ္ပဏီဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါအနိုင်ရနှင့်အတူ Larch မီးရထားအခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး
Konya, အဆောက်လုပ်ရေးကန်ထရိုက်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးကုမ္ပဏီမှဖိတ်ကြား Karaman မီးရထားလိုင်းစီမံကိန်း Winners
ဆိပ်ကမ်းများသို့ပြန်သွားရန် Yard လမ်းနှင့်ရထားလမ်း Connections ကို Project မှမာစတာအစီအစဉ်ကိုအနိုင်ရလေလံကြေညာခဲ့သည်ထားပြီးလုပ်
ဆိပ်ကမ်းများသို့ပြန်သွားရန် Yard လမ်းနှင့်ရထားလမ်း Connections ကို Project မှမာစတာအစီအစဉ်ဆောက်လုပ်ရေးကန်ထရိုက်ကုမ္ပဏီတင်ဒါအနိုင်ရနှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်
လျ: ဖက်စ်: အီးမေးလ်ပို့ရန်: